Nhengo mbiri dzeZanu PF, VaMorton Malianga naDr Ellen Gwaradzimba, avo vakafa nemusi weChishanu chapfuura, varadzikwa semagamba paNational Heroes Acre mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangawa, vachikurudzira veruzhinji kuchinja maitiro avo pakurwisa chirwere cheCovid-19 icho chakatora hupenyu hwevaviri ava.
VaMalianga, avo vanga vari nhengo yeZanu PF Central Committee, vakashaya musi wa15 Ndira kuParirenyatwa mushure mekurwara kwenguva diki uye Dr Gwaradzimba, avo vanga vari gurukota reManicaland, vakashaya musi mumwe chetewopane chimwe chipatara muHarare mushure nemubatwa neCovid-19.
VaMnangagwa vati hutachiwana hweCovid-19 huriko mazuvano huri kupararira zvakanyanya uye zvakakosha kuti vanhu vachinge maitiro avo pamwe nekutevedza zvese zvinosungirwa kuitwa nebazi rezvehutano neWorld Health Organisation mukudzivirira kupararira kweCovid-19.
Vatiwo zvakakosha kuti vanhu vasina mabasa akakosha avanoita vagare kudzimba vachiti Zimbabwe ichakunda denda reCovid-19 kana vanhu vakazvidzivirira kubva kuCovid-19.
Denda reCovid-19 rauraya makurukota matatu ehurumende, kusanganisira VaPerence Shiri vakafa gore rapera, uye gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, VaSibusisio Moyo, avo vakashaya nezuro.
Hurumende haisati yazivisa nezvehurongwa hwekuti VaMoyo vacharadzikwa riini.
MVakafanobata chigaro chemutauriri weMDC T, VaWitness Dube, vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana naVaMnangagwa kuti vanhu vagare mudzimba pamwe nekushandisa nzira dzese dzekuzvidzivirira kubva kuCovid-19.
Munyori anoona nezvehutano muMDC Alliance, uye vaive gurukota rezvehutano muhurumende yemubatanidzwa, Dr Henry Madzodzera, vatiwo ichokwadi kuti hutachiwana hweCovid-18 hwave kuparararira zvakanyanya.
Dr Madzodzora vatiwo zvakakosha kuti hurumende iite ongororo yekuona kuti hutachiwana huripo mazuva ano hune hukasha kudarika hwaivepo here.
Kunyange hazvo mitemo yekudzivirira kupararira kweCovid-19 ichiti munhu anenge ashaya nedenda anofanira kuvigwa nekukasika, izvi hazvisi kuitka kuvakuru vakuru muhurmende nevezvematongerwo enyika.
Dr Madzorera vati pafanofanira kugadziriswa kuitira kuti mutemo ubate vanhu zvakafanana.
VaMnangagwa vati Zimbabwe yakawana kuzvitonga kuzere nekuda kwekuzvipira kwakaita vanhu vakaita saVaMalianga naDr Gwaradzimba avo vakarwa muhondo yerusunununguko.
Vatiwo vanhu vakadzidza munyika vanofanira kuita zvematongerwo sezvaitwa naDr Gwaradzimba kuitira kuti zvirongwa zvehurumende zvekusimudzira hupfumi zvakaita seVision 2030 neNational Development Strategy 1 zvibudirire.
VaMalianga naDr Gwaradzimba mangamba echitatu kuvigwa zuva rimwe chete paHeroes Acre zvichitevera kuvigwa kwaVaGeorge Rutanhire naAmai Maud Muzenda muna 2017 uye Amai Vivian Mwashita naAmai Victoria Chitepo muna 2016.